Al-Shabaab oo saddex dhalinyaro ah xukun dil ah ku fulisay - Jowhar Somali news Leader
Home News Al-Shabaab oo saddex dhalinyaro ah xukun dil ah ku fulisay
Al-Shabaab oo saddex dhalinyaro ah xukun dil ah ku fulisay
Wararka ka imanaya deegaanka Buq-Aqable ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xoogagga Al-shabaab meel fagaaro ah ku toogteen galinkii danbe ee shalay saddex ruux oo ay ku eedeeyeen in ay la shaqeynayeen dowladda Soomaaliya.
Saddexda Ruux ee toogashada lagu fuliyay ayeey dadka deegaanku sheegeen in Al-shabaab ay ka soo qafaasheen deegaanka Ceelcali oo dhawaan dagaal uu ku dhaxmaray xoogagga Macwiisleyda iyo dagaalyahanno ka tirsan Ururka Al-shabaab.
Dagaalka Ceelcali ka dhacay ayaa la sheegay in xubno uu ku jiro sarkaal sare looga dilay Al-shabaab, taasoo keentay in ay horay soo qab qabtaan qaar ka ah dadkii ku dhaqnaa deegaanka uu dagaalku ka dhacay.
Sadexda Ruux ee Al shabaab toogteen ayaa lagu kala magacaabaa Cabdu Qaadir Xasan Aadan oo 25 Jir ah, Cabdi Caziiz Axmed Maxamuud oo 28 Jir ah iyo Faarax Cali Jibriil oo 29 Jir ah sida lagu sheegay war ka soo baxay Al shabaab.
Inkastoo Al-shabaab ay ku eedeeyeen saddex ruux oo ay toogteen in ay la shaqeyneeyn dowladda soomaaliya haddana dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dadkaasi ay ahaayeen dad shacab ah.
Ma jiro wali wax war ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka gobolka Hiiraan oo la xiriira warka ku saabsan saddexda ruux ee toogashada lagu fuliyay.